Oracle mebiri na CentOS | Site na Linux
Oracle mebiri na CentOS
diazepan | | Nkesa, Noticias
Ọ bụ ezie na aha Oracle na-ada ka onye iro nke free software, e nwere n'ezie a nkesa na-akpọ Linux Oracle. Ọ bụ mmepụta oyiri mmepụta nke Uhie okpu Enterprise Linux nke ahụ nwere 2 kernels, otu 100% dakọtara na Red Hat na onye ọzọ akpọ "Unbreakable Enterprise Kernel" nke a na-ahaziri site na Oracle ma na-enye mmụba na arụmọrụ ka mma ma e jiri ya tụnyere kernel 2.6.32 nke RHEL ji. Oracle Linux bụ n'efu (ị ga-edebanye aha iji budata ya), ma ọ bụrụ na ịnwere euro 400 ị nwere ike ị nweta nkwado nke teknụzụ otu afọ site na Oracle.
Ugbu a ebe ọgụ dị? Oracle mere a obere peeji ebe a gbalịrị ime ka ndị ọrụ kwenye CentOS a gaa na Linux Linux. Ha mere n'ezie a script ihe ọ na-eme bụ na mmelite ahụ sitere na ebe nchekwa Oracle.
Mana ichota na achicha bu a eserese na peeji nke na-atụ aro na mmelite nchekwa okpu abata na mbụ Linux karịa CentOS. Ihe eserese a sitere na afọ gara aga mgbe CentOS nwere nsogbu ịdebe Red Hat, ma n'ihi nsogbu dị n'ime yana n'ihi na Red Hat kpebiri ịgbanwe ụzọ nke ibipụta koodu isi ya, na-eme ka o sie ike maka clones recompile (karịsịa Oracle Linux, mana na-apụghị izere ezere na CentOS), nke ahụ bụ mgbe ha jiri Oracle Linux na Linux Linux (ọmarịcha ọzọ RHEL nke na-amalite ime ka ndị mmadụ kwuo okwu). Otú ọ dị eserese ahụ egosighi nyocha nke ihe na - eme na 2012, na ọ bụ blog Bashton onye na-apụta imegide Oracle site n'igosi na afọ a, mmelite nchekwa Red Hat bịarute na mbụ na CentOS karịa Oracle.
Yabụ, ịkọwagharị Ogwe, «Ọ bụrụ na ezughị Oracle the mkpari na o meela na ikpe ya megide Google, nke onye ọka ikpe kwụrụ ụgwọ ụgwọ iwu nke onye iro ya arọ, ugbu a, ha malitere ibuso CentOS agha Onye ojoo bad, nke ahụ bụ, onye na-alụ ọgụ site n'ihu ihu na-enweghị ike ịgbalịsi ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Oracle mebiri na CentOS
Ihe 6 kwuru, hapụ nke gị
Oracle amaghi onye ya na ya gha xD
Carlos Carcamo dijo
Oracle kwesiri ibu ihe mara nma, ihe o na-ekwu na-adighi nma banyere ulo oru klas nke uwa karie ihe ihere, obuna karia imebi nkesa n'efu dika CentOs ka Oracle choro ...
Zaghachi Carlos Cárcamo
kwesịrị ekwesị dijo
Oracle kwesịrị ịrapara na ọdụ data ya (nke site n'ụzọ bụ ngwaahịa flagship ya) wee kwụsị iso ndị ọzọ na-agagharị.
Ka anyị tinye ihe n'ọtụtụ na:
N'otu aka, CentOS bụ ngwaahịa nke obodo, nke a pụtara na otu ihe ahụ dị ka afọ gara aga nwere ike ime (nsogbu nke ime), na-ahapụ ọtụtụ SysAdmins na nsọtụ (echetara m ụbọchị 0 Apache nke nọrọ izu 3 na-enweghị CentOS hapụ patch). Ọ dịghị onye na-emesi obi ike na ọ gaghị eme ọzọ.
N'aka nke ọzọ, Oracle bụ ụlọ ọrụ ama ama maka igbu ọrụ dị ka OpenSolaris ma ọ bụ OpenOffice (nke na-egbughị ya n'ụzọ nkịtị dị ka nke ọzọ, mana ha rụchara ọrụ ahụ) yabụ ọ bụrụ na ha enye Oracle Linux, ọ dịghị onye na-achọpụta na echi ha ga-ewepu ụdị ha "Efu" ma hapụ naanị ịkwụ ụgwọ.
N'iji ha tụnyere, m na-ahọrọ CentOS, nke taa na-eme ihe nke ọma ma soro RHEL (Red Hat Enterprise Linux).
N'aka nke ozo enwere SL (Scientific Linux), nke CERN na Fermilab meputara, ma obu distro nke hadron collider jiri.
Ahụrụ m distro dị ka nke a:
- Ndị na-akwụ ụgwọ ya na ndị injinia na-akwụ ụgwọ ya.
- E bipụtara patch ha n'agbata awa 24 na 48 mgbe nke RHEL dị na oge nsogbu CentOS ka n'oge ahụ ọtụtụ gbanwere SL.
- Ha na-agbanwe ụfọdụ nchịkọta ma tinye ndị ọzọ dabere na mkpa ha.
- Ha na-agwakọta mmelite. Ha dị ugbu a na nsụgharị 6.2 mana tinye ihe nkedo RHEL 6.3 na ụdị ha dị ugbu a. O doro anya na nke a adịghị njọ, ọ pụtara na ha enweghị mkpa ịhapụ ụdị 6.3 nke SL ma enwere "mana" na nke ahụ bụ na ọ bụ distro lekwasịrị anya na nke CERN, ndị na-eji ya n'ime ma ọ bụghị maka ndi nke mmadu efu. Ma nke ahụ adịghịkwa njọ, m na-achọ ihe na-adịghị mma na distro.
Na mpempe, ndị a niile RHEL clones nwere ha "ihe" na ọ ga-adabere na onye ọ bụla nke ha na-ahọrọ.
Zaghachi ka okwesiri
Ọfọn, ka ụlọ ọrụ ndị nwere ego na-enwe, ka ha na-achọkwu oke. Enwere m olileanya na a ga-agbazi ha n'oge ma ghara ịkwụsị dị ka SCO - ọ bụ ezie na ha ga-achọ ya nke ọma.
Ogboko 05 dijo
dị ka m dere na Linux dị: enwere oracle Linux?, na-abụghị sacasm, kedụ ihe bụ agba? M na-ekwu ma ọ bụrụ na ha na-ada dị ka ebe a ha na-ekwu na ọrụ obodo ga-adị n'ihu asọmpi ha n'ezie? Echere m na nchịkwa nchịkwa ọ bụ oge maka ụfọdụ isi iji tụgharịa!
Fernando Cassia kwuru dijo
"Akpọrọ m Larry asị" na m kpọrọ asị Oracel "abụghị arụmụka ọrụ aka dị mma.
Zaghachi Fernando Cassia
[Archlinux] GRUB Legacy adịghị na nkwado
Linux Mint 13 Xfce dị